Maalinta: 29-ka July, 2018
Jaamacadda A Plus Magaca Magaalada Ardayda Jaamacadda Izmir
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo ku guuleysatay helitaanka darajada AAA ee hayadaha qiimeynta caalamiga ah, ayaa heshay darajada A + ardayda jaamacada waqtigan. Daraasadda Daraasadda Ardayda Saaxiibtinimada Ardayda ee Dostu ”oo ay sameysay Shaybaadhka Cilmi-baarista ee Jaamacadda 81 [More ...]
Nergiz joogta Isban Stop
Izmir Karşıyaka Degmadda Nergiz Izban Stop ayaa ah dhibane ka yimid koronto-bixiyeha oo aan shaqeynin qiyaastii laba toddobaad. Gaar ahaan, muwaadiniinta sheegay in waayeelka iyo dadka naafada ah lagu qasbay, “In kasta oo digniinahayaga aan u jeedineyno shaqaalaha ka shaqeeya Izban aysan xallin dhibaatadeenna. [More ...]
Guddoomiyaha Gobolka Gedo oo ka yimid TCDD
Gaadiidka TCDD Co. Mr. Veysi KURT, Maareeyaha Guud iyo Guddoomiyaha Golaha Agaasimayaasha, iyo TCDD Taşımacılık A.Ş. Madaxa Waaxda Saadka, Mehmet ALTINSOY, xafiiskiisa Çağlar Tekin, gudoomiyaha degmada Gülşehir, Nevşehir [More ...]
Dowladda Hoose ee Ordu, oo ka dhigtay gobolka mid muhiim u ah nolosha bulshada oo daraasaddeeda ku saabsan xeebta Altınordu, waxay isu diyaarineysaa inay ka fuliso shaqo la mid ah degmada Fatsa. Duqa Magaalada Enver Yılmaz, “Degmada Fatsa Atatürk Park [More ...]
Maanta taariikhda: 29 July 1896 Eskişehir-Konya Line
Maanta 29 July 1896 Eskisehir-Konya Line (443 km) ayaa lagu dhammeystirey taariikhda. Sidaa darteed, tagitaanka Istanbul ka soo Konya, 2 ayaa hoos u dhacday maalintaas. Khadka ayaa ahaa mid lagu soo xulay 31 December 1928.